Alarobia 04 Desambra 2019. – FJKM
Alarobia 04 Desambra 2019.
Alahatra ho toy ny tantara roa mitanjozotra ny faharavan’i Babylona sy ny fanavotana ny firenen’i Joda eto. Mifaningotra rahateo izy ireo.
1- Ny faharavan’i Babylona (and1-3/9-16)
Tsy nisy raraka an-tany ny faminaniana nampitondraina an’i Jeremia . Nendahina tamin’ny sampin’ny Kaldeana ny heriny (and2). I Merodaka no tena andriamaniny. Samy tsy nisy nahavonjy azy anefa ireo . Ravarava tanteraka ny taniny (and3) . hery avy any avaratra no namotika azy . Matanjaka sy misy hery miafina hatrany ny avy any avaratra teo amin’Israely (Jer 1.14 /Eze 1.4)
Miahy ny vahoakany Andriamanitra fa maniraka kosa ny firenena lehibe , ny Mediana sy ny Persiana , hamely an’i Babylona (and9) satria nanota tamin’ny Tompo izy (and14) . Ao an-damosin’ny tantaran’Israely olony hatrany ny Tompo. Izy no Tompon’ny famaliana (and15)
2-Ny fanavotana ny Israely
Koa satria niraraka ny hery nangeja ny Joda dia misokatra ho an-drizareo ny làlana mody mankany Jerosalema niaviany . Ranomasom-pifaliana no handehanany miverina amin’ny Tompo (and4). Fanekena mandrakizay no ifamatorany amin’ny olony , izay miverina amin’ny Tompo « fonenan’ny fahamarinana » (and7).